Iko hombe 9To5Mac "muparadzi" yakanaka kana yakaipa? | Ndinobva mac
Kuziva ruzivo kana kusaruziva, ndiwo mubvunzo. Chaizvoizvo kudonhedza kweApple zvigadzirwa uye zvimwe zvigadzirwa ndezvimwe zvinowanzoitika pane zvinodzokororwa pamambure, kuziva ruzivo kana dhizaini yechigadzirwa chavanofanira kutiratidza kwatiri mumazuva mashoma zvakajairika, heino mubvunzo ndouyu: Aya marudzi e "vapambi" akanaka kana akaipa?
Ehezve, kumakambani chinhu chakashata, asi kune vashandisi vari kunyanya kufambidzana nenhau zvinogona zvakare kuve izvo sezvo kushamisika chinhu kuchirovera mukati uyezve kuzvidemba kunouya. Zviripachena kuziva chigadzirwa mune zvakadzama mavhiki maviri isati yatanga kuvhurwa zviri pamutemo Haisi chimwe chinhu chinoitika nguva zhinji kuApple, asi panguva ino yaive hombe "muparadzi".
Aya marudzi e "vapambi" akanaka kana akaipa?
Mhinduro kumubvunzo inosiyana kubva pamunhu kuenda kumunhu, asi kazhinji chinhu chakaipa kubvira zvinogumbura zvachose kushamisika kwekambani muhurukuro. Chero zvazvingaitika, kana mufananidzo kana iyo tsananguro yemidziyo yasvinwa, tinoda kuziva mamwe data uye saka hachisi chinhu chakashata kudaro. Uye zvakare, vazhinji vedu tave kutoziva nezve kutenga kana kwete izvo zvavari kuzotiratidza, saka ine yakanaka yayo zvakare.
Vazhinji vedu tinogara tichida kuona zvigadzirwa zvisati zvaburitswa uye mune izvi zviri pachena kuti izvi zvanga zviri izvo. Zviripachena, izvi zvese zvinogona kukonzera matambudziko kumunhu, wepakati kana munhu anotarisira kusefa iyi mifananidzo yezvigadzirwa zviviri pamberi pehurukuro yavo, asi izvi izvozvi hazvina kana basa sezvo nyama iri patafura. Uye newe, Iwe uri mumwe weavo vanosarudza kuziva chigadzirwa mazuva asati aunzwa kana, asi, iwe uri mumwe weavo vasingade kuona chero chinhu kusvikira chazoratidzwa?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » 9To5Mac's Big Spoiler Yakanaka kana Yakashata?
Juan Gallardo akadaro
Ini ndinofunga chikamu chekuratidzira, chemashiripiti, nezvimwe. Hazvina kunaka kana zvakaipa.
Pindura Juan Gallardo
Gadzira kana iwe uchida kuve neazvino maapplication muMacOS Mojave Dock